Chia ကွန်ယက်၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Blockchain | Linux မှ
Chia ကွန်ယက်: ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Blockchain
Linux Post Install လုပ်ပါ | 10/09/2021 06:00 | applications များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်ကိုလေ့လာကြမည် DeFi စီမံကိန်း (Decentralized Finance: Open Source Financial Ecosystem) ဟုလူသိများသည် Chia ကွန်ယက်မရ။ မနေ့ကငါတို့ပို့စ်ကိုဆက်လုပ်ဖို့အတွက်လုပ်တယ်။
Chia ကွန်ယက် လေ့လာစူးစမ်းပြီးသားအခြားများစွာကဲ့သို့၎င်းသည်အသုံးဝင်သည်သာမက ကိရိယာများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများဒါပေမယ့်ခွင့်ပြုတယ် Operating Systems အသုံးပြုမှုကိုငွေရှာပါဘက်စုံသုံးအပလီကေးရှင်း (သို့) ၎င်းအတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ cryptocurrency (များ) (သို့) ၎င်း၏ပလက်ဖောင်း၏ဇာတိ (သို့) သီးခြားတစ်ခုအားတူးဖော်ရန်သတ္တုတူးဖော်ရေးဆော့ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်အသစ်အဆန်းသည်၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည် Hard Drive သိုလှောင်ရန်နေရာ, အစား GPU၊ CPU (သို့) RAM.
ပြီးတော့ငါတို့ကပုံမှန်လိပ်စာပေးတယ် DeFi စီမံကိန်းများ သို့မဟုတ်ပြောခဲ့သောအကြောင်းအရာများ အိုင်တီဒိုမိန်းကျွန်ုပ်တို့၏အချို့ရှိနောက်ဆုံး link အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ချက်ချင်းချန်ထားခဲ့ပါမည် ယခင်ဆက်စပ်ရေးသားချက်များမရ။ ဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်ပြီးသွားရင်သူတို့ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့စိတ် ၀ င်စားတဲ့သူတွေအလွယ်တကူလုပ်နိုင်ပါတယ်။
"Utopia သည်အခြေခံအားဖြင့်လုံခြုံသော instant messaging၊ encrypt လုပ်ထားသော email ဆက်သွယ်မှု၊ အမည်မသိငွေပေးချေမှုများနှင့်ကိုယ်ပိုင် web browsing တို့ကိုအသုံးပြုရန်အတွက် all-in-one kit တစ်ခုဖြစ်သည်။ GNU / Linux Operating Systems များတွင်သုံးရန်အသင့်တော်ဆုံးအရာဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သော RAM မှတ်ဥာဏ် (4 GB) နှင့် fixed public IP address တို့ဖြင့်ငွေရှာရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်လုံခြုံသောဆက်သွယ်ရေး၊ အမည်မသိငွေပေးချေမှုနှင့်အမှန်တကယ်လွတ်လပ်ပြီးနယ်နိမိတ်မဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောလွတ်လပ်မှု၊ အမည်ဝှက်ခြင်းနှင့်ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုမရှိခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန်ထုတ်ကုန်တစ်ခုအဖြစ်ဖွဲ့စည်းသည်။" Utopia: Linux အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဗဟိုကျသော P2P ဂေဟစနစ်
1 Chia ကွန်ယက်: သိုလှောင်ရန်နေရာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်း
1.1 Chia Network ဆိုတာဘာလဲ။
1.2 ဤ DeFi စီမံကိန်းသည်အောင်မြင်ရန်နှင့်ကမ်းလှမ်းရန်အဘယ်အရာကိုရှာဖွေသနည်း။
1.3 Linux ရှိ Chia Mining Software ကိုကြည့်ပါ
Chia ကွန်ယက်: သိုလှောင်ရန်နေရာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်း
Chia Network ဆိုတာဘာလဲ။
သင့်ရဲ့အဆိုအရ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, Chia ကွန်ယက် ၎င်းကိုအောက်ပါအတိုင်းအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားပါသည်။
"ပိုမိုဗဟိုကျသော၊ ပိုမိုထိရောက်။ ပိုမိုလုံခြုံသောပိုမိုကောင်းမွန်သော blockchain နှင့် smart အရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်း".
"Chia Network သည်အလဟသဖြုန်းတီးမှုနည်းပြီးဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသော၊ ပိုလုံခြုံသော open source ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ blockchain တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Bitcoin blockchain မှလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်ဆင်တူသော်လည်း Chia တွင်အရင်းအမြစ်သည်တွက်ချက်မှုစွမ်းအားမဟုတ်ဘဲ disk space ဖြစ်သည်။
၎င်းကိုရရှိရန် Bitcoin ၌သုံးသော“ အလုပ်အထောက်အထားများ” ကို“ အာကာသအထောက်အထားများ” ဖြင့်အစားထိုးပြီး disk space သည်အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်လာပြီးဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော“ Nakamoto-style” သဘောတူညီမှုကိုရရှိရန်အချိန်သက်သေပြသည်။ မရ။ Chia Network သည်စမတ်အရောင်းအဝယ်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်". Chia Network အကြောင်း
တကယ်လို့များမင်းကမကြာသေးခင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းအကြောင်းနည်းနည်းပိုစူးစမ်းချင်တယ်ဆိုရင် Chia ကွန်ယက် မင်းငါတို့ရဲ့အရင်ပို့စ်ကိုအခုလိုစူးစမ်းနိုင်တယ် DeFi စီမံကိန်း:
cryptocurrency Chia သည် hard drive များ၏စျေးနှုန်းကိုမြင့်တက်စေသည်
ဤ DeFi စီမံကိန်းသည်အောင်မြင်ရန်နှင့်ကမ်းလှမ်းရန်အဘယ်အရာကိုရှာဖွေသနည်း။
ဤပရောဂျက်၏ကြီးမြတ်သောအရာတစ်ခုမှာ၎င်း၏ဖြစ်သည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် အလွန်ကောင်းမွန်သည် သတင်းအချက်အလက်ကိုစပိန်ဘာသာစကားဖြင့်မရ။ ၎င်းတွင်သူသည်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုအောက်ပါအတိုင်းပြောသည်။
"ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုနှင့်ငွေကြေးစနစ်များတိုးတက်စေရန် Chia Network ကိုတည်ဆောက်နေသည်။ Chia သည်ပထမဆုံးသောလုပ်ငန်းသုံးဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဖြစ်လာလိမ့်မည်။ Chia သည် Bitcoin မှ စ၍ ပထမဆုံး blockchain သဘောတူညီမှုနည်းလမ်းသစ်ကိုအသုံးပြုနေသည်။ အာကာသနှင့်အချိန်ကို Proof ဟုခေါ်သည်၊ ၎င်းသည် BitTorrent ၏အကြီးမားဆုံးသောလူနေမှုကွန်ယက် protocol အင်ဂျင်နီယာနှင့်တီထွင်သူ Bram Cohen ကဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Chialisp သည်အစွမ်းထက်၊ စစ်ဆေးရန်လွယ်ကူပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသော Chia ၏အသိဉာဏ်ရှိသောငွေသွင်းငွေထုတ်အစီအစဉ်သစ်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိရရှိနိုင်သောစမတ်လွှဲပြောင်းငွေလွှဲမှုများမှာအနုမြူလဲလှယ်မှုများ၊ ခွင့်ပြုချက်ရငွေများ၊ ပြန်လည်ရယူနိုင်သောပိုက်ဆံအိတ်များ၊ ဘက်စုံသုံးပိုက်ဆံအိတ်များနှင့်ကန့်သတ်နှုန်းရှိသောပိုက်ဆံအိတ်များဖြစ်သည်။".
Linux ရှိ Chia Mining Software ကိုကြည့်ပါ
ဒီပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့မင်းရဲ့ download ကိုလုပ်ရမယ် GNU / Linux အတွက်သတ္တုတူးဖော်ရေးဆော့ဝဲ သူ၏ တရားဝင်ဒေါင်းလုပ်အပိုင်းမရ။ ပြီးရင်မင်းရဲ့ရှိပြီးသားဒါမှမဟုတ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ package manager ကိုသုံးပြီး terminal ဒါမှမဟုတ် console မှတဆင့်ပုံမှန်အတိုင်း install လုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏လက်တွေ့အခြေအနေတွင် installer ကိုလိုက်ဖက်သောပုံစံဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်လိမ့်မည် Debian / Ubuntuဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကပုံမှန်အတိုင်းပဲသုံးလိမ့်မယ် Linux ကို Respin လုပ်ပါ ကိုခေါ် အံ့ဖွယ်အမှုများ GNU / Linuxအပေါ်အခြေခံပြီးသော MX Linux ကို 19 (Debian 10), ငါတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်ပါတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် «Snapshot MX Linux လမ်းညွှန်»မရ။ ပြီးတော့ငါတို့ကဒီသတ္တုတွင်းဆော့ဝဲရဲ့အင်္ဂါရပ်အားလုံးကိုစူးစမ်းလိမ့်မယ်။
မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက configure လုပ်ပြီးအသုံးပြုပါ GNU / Linux တွင် Chia Network နှင့်အခြား လည်ပတ်မှုစနစ်များအောက်ပါတို့ကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်စတင်နိုင်သည် link ကိုမရ။ နောက်ကိုကြည့်ပါ ဗီဒီယိုက.
တိုတိုပြောရရင် Chia ကွန်ယက် အများအပြားထဲကတစ်ခုဖြစ်သည် DeFi စီမံကိန်းများ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောနည်းပညာနှင့်ငွေကြေး / စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များနှင့်အထူးကိစ္စများတွင်ပါ ၀ င်သည် Linuxeros နှင့် GNU / Linux Distros ၎င်းတွင်အမြတ်ထုတ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကိုပေးသည် Cryptocurrencies ၏ကမ္ဘာအားဖွငျ့ဖွစျသညျ ဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်း အတူတူကနေ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Chia ကွန်ယက်: ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Blockchain
Project OutFox: ဗားရှင်းအသစ် 5.3 Alpha 4.9.10 ကိုသြဂုတ်လမှရရှိနိုင်ပါတယ်
Google Chrome သည်ကွတ်ကီးများနှင့်ဆိုဒ်ဒေတာများပေါ်တွင်ထိန်းချုပ်မှုများကိုဖယ်ရှားလိုသည်